Miguel Serrano | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အချိန်အား
ဒီဆောင်းရာသီ အသစ်စီးရီး၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တင်သည် အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကြံစည်မှုများ၌နှစ်မြှုပ်ခြင်း၊
သင်ဟာဒရာမာဇာတ်လမ်း၊ ဟာသ၊ သရုပ်ဆောင်မှု၊ သိပ္ပံဝတ္ထု၊ အောက်ပါရွေးချယ်မှုတွင်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်.
3 ဤတွင်နှင့် Now ကို
4 အရာအားလုံး shit ဖြစ်ပါတယ်
သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်မာစတာဖိလစ်ကေဒစ်၏အလုပ်အပေါ်အခြေခံသည်“ Electric Dreams” သည်“ Black Mirror” ပုံစံဖြင့်သီးခြားဇာတ်လမ်း ၁၀ ခုပါဝင်သည်။ ယခုအမေဇုန် streaming ဝန်ဆောင်မှုတွင်ရနိုင်သည်။
ဒုတိယရာသီအဘို့ဤဒီဇင်ဘာလကတည်းကသက်တမ်းတိုး ကြည့်ရှုသူ၏ဥာဏ်ရည်ကိုအစဉ်အမြဲစိန်ခေါ်သောဂျာမန်ထုတ်လုပ်မှု ဒီဆောင်းရာသီ၏စွဲလမ်းမှုအများဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းတနင်္ဂနွေမာရသွန် marking အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ဤတွင်နှင့် Now ကို
'နှစ်မီတာမြေအောက်' နှင့် 'True Blood' ကိုတီထွင်ခဲ့သော Alan Ball သည်ဤအရာနှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် အော်စကာဆုရှင် Tim Robbins နှင့် Holly Hunter သရုပ်ဆောင်ထားသောမိသားစုပြဇာတ် အရာဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်နေ့တွင် HBO စပိန်ထိမှန်ပါလိမ့်မယ်။
အရာအားလုံး shit ဖြစ်ပါတယ်
'80' Stranger Things 'နှင့်အတူ 90s များအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုလောင်စာအတွက်အောင်မြင်ပြီးနောက်, Netflix ကဖေဖော်ဝါရီလ 16 ရက်နေ့တွင်' XNUMXs နှင့်အတူသွားလာရင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ 'Todo es sucks' ('Everything Sucks!') သည်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုနှင့်ပတ်သက်သောဟာသဖြစ်သည် 90 ကျော်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုးကားတစ်တန်ကတိပေးထားတယ်.
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်ဤစီးရီးသည်ရစ်ချတ်မော်ဂန်၏ဝတ္ထုနှင့် Joel Kinnaman သရုပ်ဆောင်ထားသော Netflix တွင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနောက်တွဲယာဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးကတိပေးထားတယ်အဖြစ်အလွန်ကျေနပ်စရာ cyberpunk ဗေဒ။ 2018 ၏မျှော်လင့်အရှိဆုံးသစ်ကိုစီးရီးတစ်ခုမှာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ဒီဆောင်းရာသီကိုကြည့်ဖို့အသစ်ငါးခုစီးရီး